Madaxweynaha Hirshabeelle oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka kasocda SH Dhexe. – Radio Daljir
Madaxweynaha Hirshabeelle oo ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedka kasocda SH Dhexe.
Febraayo 26, 2017 9:25 g 0
Jowhar, Feb 27 2017-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oo Warbaahinta kula hadlayay Magaalada Muqdisho ee uu howlo shaqo u joogo ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin Dagaal beeleedka ka dhacay deegaanno hoosyimaada degmada Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe,Abaaraha ka jira deegaannada Hirshabeelle, iyo Golaha Wasiirada Hirshabeelle ee uu dhowaan Madaxweynuhu Magacaabay.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dalbaday in Imaaraadku joojiyo saldhigga Berbera.
DHEGEYSO-Gudiga gurmadka abaaraha Puntland oo deeq gaarsiiyey Mudug.